xaafadaha Beesha Arab ee Hargeysa oo noqday Zone ka caagan maamulka Siilaanyo-Canshuur lagama qaado !
09 March 2013 Waagacusub.com- Xaafadaha Beesha Arab ay ka degaan Magaaladda Hargeysa ayaa noqday degaan ka caagan Madaxda iyo askarta Maamulka Siilaanyo.
Tan iyo markii dad u dhashay beeshaas ay dileen Ciidamadda RRU-da Somaliland wax Canshuura lagama qaadin xaafadaha beesha Arab maxaa yeelay askarta Maamulka iyo Madaxda fooda ma gelin karaan,hadii ay tagaana waa dil. Beesha Arab ee Isaaq waxay Hargeysa ka degaan Xaafadaha Biibsiga,Cabdi Iidaan,Axmed Gurey,Siinaay iyo Xera Awr.
Beesha Arab oo maamulka Siilaanyo ku xumeeyneysa waxay Wadooyinka xaafadahaas ka bilaabeen dhismooyin .
Hargeysa waxaa ka jirta cabsi fara badan ,lagumana dhiiran karo in xaafadaha Arab-ka galaan Madaxda iyo askarta Maamulka Siilaanyo.
Beesha Arab oo qadiyadda Somaliland u dagaalantay waxaa lagula kacay xaqiraad taariikhda gashay,waxayna ka xumaadeen sida Golayaasha Somaliland ee Wakiiladda iyo Guurtida uga aamuseen falkii lagu xasuuqay Caruurtooda.
Beelaha Garxajis iyo Habar Awal ayaa dhoosha ka qoslay markii dhalinyarta beesha Arab lagu gumaaday Hargeysa maxaa yeelay xilligii Dagaaladda Sokeeye waxay Arab la safnaayeen beesha Habar Jeclo.
Beesha Habar Jeclo waxaa ka dhashay Madaxweynaha Somaliland Ahmed Mohamed Siilaanyo.
Somaliland oo laba sano deb kaga shidnaa darafyada hada wuxuu kii ugu weynaa ka holcayaa Caasimadda,waana hubaal in xaaladu dagaal sokeeye ku dambeyn doonto hadii la isku dayo in Arabka xoog lagu maquuniyo.
Beesha Arab waxay Shirweyne ku yeelanayaan degaankooda Beligubadle.